Tirooyinka Raacayaasha Weyn Miyey Dhab Tirtaa? | Martech Zone
Tirooyinka Raacayaasha Weyn Miyey Dhab Tirtaa?
Khamiis, Maarso 25, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Haddii aan ku dari karo 100 qof oo macaamiil ah ama 10,000 oo macaamiil ah khadka tooska ah, waxaa laga yaabaa inaysan wax isbeddel ah ku sameynin khadkayga hoose. Waxaan u baahanahay inaan soo jiito xaq u macaamiisha si dhab uga helaan ganacsi iyaga ka mid ah. Xitaa waxaan horay u qoray taas suuqgeyntu kuma saabsanaan isha indhaha, waxay ku saabsan tahay ujeedka.
Miyaan badalay maskaxdayda? Maya, maahan markay tahay xayeysiinta.
Waxba igama gelin inta wadarta guud ee raacsan ama macaamiisha ah ee aad haysato, waxaan dan ka ahay tirada kuwa raacsan ama macaamiisha ee leh danaha guud ama laga yaabo inay ii noqdaan macmiil aniga ahaan. Haddii aad soo bandhigto awoodda aad ku xayeysiin karto shabakaddaada, waan sameyn doonaa haddii tirada kuwa raacsan ama macaamiisha ku habboon waxay ku habboon tahay ganacsigeyga - maahan kaliya si fudud maxaa yeelay waxaad leedahay shabakad weyn.
Faa’iido ayaa ku jirta tirooyin waaweyn, in kastoo. Waa dallacsiin iyo amar.
Tirada ayaa ku socota xawaare. Xisaabinta raacayaasha hoose waxay sababaan korsashada raacsan ee hoose. Waxaa laga yaabaa inaad leedahay barta ugu fiican, koontada twitterka ama bogga facebook ee adduunka universe laakiin waa wax laga xumaado in lagu daro kuwa raacsan marka aadan waxna haysan. Haddii aad leedahay 100 raacsan, waxay ku qaadan kartaa toddobaadyo ama bilo inaad si dabiici ah u gaarto 200, xitaa iyada oo leh waxyaabaha ugu fiican.
Iyadoo Kuwa 10,000, inkasta, waxaad awoodi kartaa inaad kudarto 100 maalintii! Waxaa jira laba sababood:
Lambarro waaweyn ayaa xaqiijinaya inaad tahay heshiis weyn. Waan ogahay inay taasi u egtahay wax lagu qoslo, laakiin waa run. Dadku waa caajis… waxay jaleecaan boggaaga Twitter, boggaaga Facebook ama balooggaaga waxayna isku dayaan inay ogaadaan inta heshiiskaagu yahay. Haddii aad leedahay lambarro waaweyn, waxay u muuqdaan inay riixaan badhanka raacitaanka si aad u fudud. Waa xaqiiqo nasiib darro ah. Sidoo kale waa sababta aan ugu soo bandhigo calaamado dhowr darajooyin ah dhinaca garabka.
Lambarro waaweyn ayaa kuu oggolaanaya fursad aad ku dhiirrigeliso. Sannado badan ka hor, waxaan sameeyay imtixaan aan ku shaaciyey in balooggeygu uu ku guuleystey abaalmarin sida blog-ka ugu suuq geynta fiican internetka. Waxaan sameeyay tan suuq geyn ah oo meel walbana waan ka dallacsiiyay. Akhriska balooggeygu si aad ah buu u kordhay natiijada ka dhalatay. Kadib waxaan qoray qoraal ku saabsan sida aan u sameeyay.
Waxaan daawaday qorayaal kale oo intabadan sameeya, sidoo kale. Dib ugu noqo markii aad jabsan karto xisaabiyeyaasha macaamiisha Feedburn, waxaan arkay in yar oo ka mid ah kuwa wax qora ee internetka wax ku qora oo aad uga faa'iideysta oo sameeya Baloogyadooda ayaa cirka isku shareeray caan ahaanshahooda - waxay ahayd wax aan caadi ahayn. Waxaan ka baqay khiyaanada si khaldan (illaa ay aad u fudud tahay oo aan kaliya ku qasbanahay inaan dadka baro cashar ku soo koray).
Miyaan u doodayaa qishka ama iibsashada kuwa raacsan? Taasi adigaa iska leh. Runtii kuu sheegi maayo inay tahay wax xun ama wax fiican. Kaliya waxaan kuu sheegayaa inay run ahaantii shaqayso.
Hada waan xayeysiinayaa koontadayda Twitter oo leh isticmaaleyaal muuqaal leh oo aad ku dartay dhowr boqol oo raacsan oo cusub. Waa adeeg fiican oo rukhsad ku saleysan, marka ma khiyaameynayo ama ma iibsanaayo kuwa raacsan - kaliya waan is xayeysiinayaa. Hadafkeygu waa in aan ka badiyo 10,000 oo raacsan sida ugu dhaqsiyaha badan.
Hal qoraal oo ku saabsan Isticmaalayaasha Astaamaha ah: Anigu ma bixin lahaa lacagta weyn Iibso Mar xirmo mustaqbalka. Aniga korsashadeyda ayaa cirka isku shareertay bilowgii ololaha ilaa iyo markaasna way dhacday - malaha maxaa yeelay wejigeyga waxaa lagu quudinayaa isla dadkaas in ka badan iyo in ka badan. Waxaan sidoo kale wax ka badalayay goobteyda tan iyo markii ay bartilmaameedsadeen juqraafi ahaan. Mustaqbalka, waxaan u maleynayaa inaan kaliya iibsan doono xaddiga ugu yar ee xayeysiinta ka dibna aan ku fuliyo ololayaasha iyaga rukunka bil kasta.
Toban kun oo raacsan ayaa ah tiro fiican oo kor loo qaado. Tan iyo markii aan qorayo buug soo bixi doona bisha Ogosto (Blogging Corporate for Dummies), waxaan rabaa inaan kor u qaado dhammaan lambarradayda - guud ahaan Facebook, Twitter, iyo macaamiishayda quudinta. Sidan oo kale shabakaddeyda si aan ugu dhiirrigeliyo gudaheeda ayaa ka weyn waana ku taaban karaa dad badan.
Markaa… haa, waxaan aaminsanahay in tirooyin tiro badani tirsanayaan!
Kireynta Liiska Emailka, Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Mar 26, 2010 at 10: 58 AM
Habka xiisaha leh, waad ku mahadsantahay wadaagistiisa.
Waan kugu raacsanahay, tirooyin tiro badan ayaa la tiriyaa, in kastoo taasi ka turjumeyso ganacsiyada ku soo qulqulaya bartaada. Tirooyin badan ayaa gacan ka geysta ka-qaybgalka hoggaanno aqoon badan leh, maaddaama ay la dhacsan yihiin oo ay soo jiitaan dad badan oo halkaas joogay. Markaa waa inaad tallaabo qaaddaa. Xaqiiqdii, talo ahaan waxaan kuu soo jeedin lahaa inaad ka faa'iideysato liisaska ku yaal boggaaga taageerayaasha Facebook. Kala saar taageerayaasha liisaska si aad u ogaato kuwa macaamiisha noqon kara iyo kuwa aan ahayn.
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid taas, waad ku biiri kartaa boggan http://bit.ly/azEurc oo meel dhig waxyaabaha aad ka welwelsan tahay oo jawaabo deg deg ah ka hel khubarada halkaas joogta.